Askarta militeriga Iswiidhen oo kuwo badani shaqada isaga tagaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Askarta militeriga Iswiidhen oo kuwo badani shaqada isaga tagaan
La daabacay måndag 10 februari 2014 kl 10.02
Tobankii askari oo ku soo biira ciidamada militeriga Iswiidhen, toddobo ka mid ah ayaa goor hore shaqada isaga taga. Sidaasna waxaa lagu muujiyey baaritaan uu sameeyey wargeyska Svenska Dagbladet.
Iswiidhen ayaa ahayd dalkii ugu horreeyey dalalka waqooyiga Yurub oo baabi’iya hawlaha shaqada qaranka sannadkii 2010. Xilligaas wixii ka dambeeyey waxay hoggaanka ciidamada iyo wasiirka gaashaandhigguba ku doodayeen in dadka iskood u dooranaya shaqada militerigu ay si wanaagsan u socotey. Waxaana ugu dambeysey wasiiradda gaashaandhigga Karin Engström oo 14 jannaayo ee sannadkaan hadalkaas ka tiri shir ka socdey magaalada Sälen.
Si haddaba loo buuxiyo hawlaha ciidamada militeriga waxaa sannad walba loo baahnaan doonaa in la qoro ilaa 4000 oo askari. Marka la qorana waxay bilaabayaan waxbarashada aasaasiga ah ee militeriga oo marka la soo gaabiyo afka iswiidhishka loogu yaqaan GMU. Waxaase horay loo ogaa in boqolkiiba labaatan dadka waxbarashadaas bilaaba aysan dhammeysan waxbarashada GMU. Balse waxaa ilaa hadda la ogaan tirada dadka marka ay waxbarashada dhammaystaan kadib ka taga shaqada militeriga.
Tirakoobkii la helay intii u dhexeysey sannadihii 2011 iyo 2013 waxaa lagu muujiyey in dadka ay ciidamada militerigu shaqaaleeyaan aysan wada joogin. Tirakoob uu wargeyska Svenska Dagbladet ka sameeyey dadka shaqada ka taga waxaa ka soo baxay in tobankii qof oo la shaqaaleeyaba ay labo ilaa saddex qur ahi dhammeystaan xilligii heshiiska.tobankii qofba toddobo ayaa xilligii heshiiska ka hor isaga taga shaqada.
- Taasi waxay la micne tahay in haddii aan wax laga qaban uu sannad walba bulshada ugu kici doono kharash dhan 600 ilaa 800 milyan oo karoon. Sidaasna waxaa xisaabiyey Peter Nordlund, oo dhaqaaleyahan ka hawlgala Machadka cilmi-baarista gaashaandhigga oo loo soo gaabiyo FOI.